Sweden oo isku xiri doonta lacagta cayrta ah iyo luuqadda Swedish-ka (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Sweden oo isku xiri doonta lacagta cayrta ah iyo luuqadda Swedish-ka (Dhegeyso)
Sweden oo isku xiri doonta lacagta cayrta ah iyo luuqadda Swedish-ka (Dhegeyso)
(Stockholm) 05 Nof 2020 – Dadka Sweden imanaya ee doonaya inay helaan lacagta cayrta ayaa lagu waajibin inay ka qayb galaan waxbarashada Sweden isla markaana bartaan afka Swedish-ka, sida ku cad hindise ay dowladdu u gudbisey Golaha Sharciga oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha Abriil.
Dowladda Sweden, oo ay wehliyaan xisbiyada C iyo L ayaa doonaya in dadka cayrta dalbanaya lagu waajibiyo inay yaqaanaan luuqadda Swedish-ka, iyadoo hindisahan oo lagu wado in lasoo bandhigo bisha Diseembar ee soo aaddan uu qayb ka yahay heshiiskii Jannaayo.
Wasiiradda Arrimaha Bulshada Lena Hallengren (S), ayaa sheegtay in ay agab dheeri ah tahay inuu qofku ugu yaraan yaqaanno luuqadda looga hadlo dalka, si uu dhaqse bulshada ugu dhex galo.
Wasiiradda Waxbarashada Anna Ekström (S) ayaa iyana sheegtay in haweenka anjnajiga ihi ay barashada luuqaddu ku dhib badan tahay marka loo eego raga ajnabiga ah, balse loo baahan yahay in loo abuuro fursado isku mid ah oo siman, iyadoo soo dhowaysey hindisahan.
Previous articleMW Donald Trump oo dacwo furay iyo Joe Biden qarka u saaran inuu noqdo Madaxwaynaha xiga ee Maraykanka
Next articleDF Itoobiya oo isgaarsiintii & duullimaadyadii ka jartay magaalooyin hoos taga gobollada Tigreega & Amxaarada